Lasa omaly tamin’ny 8 ora sy sasany tamina fiaramanidina nofain’ny Air Madagascar ny delegasiona malagasy, izay ahitana olona 22, hiatrika ny dingan’ny ampahavalon-dalana mandroso ho an’ny fiadiana ny amboaran’ny CAF hatao any Maraoka.
Na izany aza anefa dia voatery hizara roa ny delegasiona ao Parisy mankany Casablanca ka ny andiany voalohany misy olona 12 manainga anio amin’ny 7 ora raha ny tolakandro amin’ny 1 ora kosa vao handeha ny andiany faharoa.
Niova tanteraka tsy araka ny lalana tokony ho naleha ny fian’izy ireo, izay tsy handalo an’i Dubai intsony fa tonga dia any Parisy ao amin’ny seranam-piaramanidina Charles De Gaulle. Tamin’ny alalan’ny fanekanelanan’ny Tale jeneralin’ny Telma, izay mpanohana ny ekipa, no nahafahana nahazo an’ireo toerana tao amin’io fiaramanidina io.
Hatory ao ireto delegasiona tsy nahavita « visa de transit » ireto, saingy kosa nanolotra taratasy fiantohana amin’ny fijanonany ao Parisy ny masoivohon’ny fanjakana maraokanina miasa sy monina eto amintsika. Fiara efa nomanin’ny Difaâ El Jadida kosa no hiondranan’izy ireo hamonjy ny faritanin’i Jadida, izay mbola 100 km miala ao Casablanca.
Vitaina ao anatin’ny 45 minitra ihany anefa izany, araka ny nambaran’ny masoivohon’i Maraoka miasa sy monina eto amintsika. Ny alahady amin’ny 6 ora hariva eto amintsika no hotontosaina ao amin’ny kianjan’i El Jadida ny fihaonana eo amin’ity ekipa solontenan’i Madagasikara ity sy ny Difaâ El Jadida.